OmegaCoin စျေး - အွန်လိုင်း OMA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OmegaCoin (OMA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OmegaCoin (OMA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OmegaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OmegaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OmegaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OmegaCoinOMA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0889OmegaCoinOMA သို့ ယူရိုEUR€0.0756OmegaCoinOMA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0681OmegaCoinOMA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0814OmegaCoinOMA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.81OmegaCoinOMA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.563OmegaCoinOMA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.98OmegaCoinOMA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.332OmegaCoinOMA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.119OmegaCoinOMA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.124OmegaCoinOMA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.02OmegaCoinOMA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.689OmegaCoinOMA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.473OmegaCoinOMA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6.67OmegaCoinOMA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.14.83OmegaCoinOMA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.122OmegaCoinOMA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.134OmegaCoinOMA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.76OmegaCoinOMA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.62OmegaCoinOMA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥9.41OmegaCoinOMA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩106.19OmegaCoinOMA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦33.73OmegaCoinOMA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6.54OmegaCoinOMA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.47
OmegaCoinOMA သို့ BitcoinBTC0.000008 OmegaCoinOMA သို့ EthereumETH0.000229 OmegaCoinOMA သို့ LitecoinLTC0.00155 OmegaCoinOMA သို့ DigitalCashDASH0.00103 OmegaCoinOMA သို့ MoneroXMR0.00103 OmegaCoinOMA သို့ NxtNXT7.37 OmegaCoinOMA သို့ Ethereum ClassicETC0.0125 OmegaCoinOMA သို့ DogecoinDOGE25.67 OmegaCoinOMA သို့ ZCashZEC0.00108 OmegaCoinOMA သို့ BitsharesBTS3.42 OmegaCoinOMA သို့ DigiByteDGB3.43 OmegaCoinOMA သို့ RippleXRP0.297 OmegaCoinOMA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00317 OmegaCoinOMA သို့ PeerCoinPPC0.32 OmegaCoinOMA သို့ CraigsCoinCRAIG41.88 OmegaCoinOMA သို့ BitstakeXBS3.92 OmegaCoinOMA သို့ PayCoinXPY1.6 OmegaCoinOMA သို့ ProsperCoinPRC11.53 OmegaCoinOMA သို့ YbCoinYBC0.00006 OmegaCoinOMA သို့ DarkKushDANK29.47 OmegaCoinOMA သို့ GiveCoinGIVE198.91 OmegaCoinOMA သို့ KoboCoinKOBO20.94 OmegaCoinOMA သို့ DarkTokenDT0.0819 OmegaCoinOMA သို့ CETUS CoinCETI265.23